Tolotra Fety – BNI: 1% isam-bolana ny zanabola - ewa.mg
Tolotra Fety – BNI: 1% isam-bolana ny zanabola
News - Tolotra Fety – BNI: 1% isam-bolana ny zanabola
Hifarana izao ny taona, koa nampahalala ny tolotra fampindramam-bola Fety ny BNI Madagascar, omaly. « Ho fanomezana fahafaham-po ny fianakaviana hanomana ny fetin’ny Krismasy sy handraisana ny taona vaovao izany. Mandritra ny enim-bolana hatramin’ny dimy taona ny fe-potoana famerenana ny vola amin’ny zanabola 1 % ihany isam-bolana », hoy ny ao amin’ny BNI.
Tsy mahasakana io tolotra vaovao io ny findramam-bola ho an’ny fidiran’ny mpianatra, ho an’izay efa nanao izany ka hita fa mbola mahazaka ny karaman’ilay mpindrana, mpiasam-panjakana na amin’ny tsy miankina ; efa manana petra-bola ao amin’ny BNI na mbola vao hanokatra. Nanomboka ny 3 desambra teo hatramin’ny 31 janoary 2019 izany fampindramam-bola Fety izany. Aorian’izay, hisy fisarihana hanomezana loka maro samihafa, anisan’izany ny fitsangantsanganana ho an’ny olon-droa miaraka.
Nasian-teny koa ireo ezaka vitan’ny BNI amin’ny fanokafana masoivoho vaovao, ohatra, ilay mandeha amin’ny herin’ny masoandro any Mahajanga. « Mila fampiasam-bola betsaka vao mahavita ireny satria ao anatin’ny andraikitry ny BNI ny fitarovana ny tontolo iainana », hoy ny mpandrindra ny masoivoho rehetra, Rasoloarijao Fanja. Jerena ihany koa ny fomba fandaminana ireo mpianatra mandoa ny saram-pianarany any amin’ny banky.
L’article Tolotra Fety – BNI: 1% isam-bolana ny zanabola a été récupéré chez Newsmada.
Fifanakalozan-kevitra indray izao no ketrehina sy takin’ny mpanohitra? Tsy zava-baovao fa efa fahazaran-dratsy, tarazo. Nefa na ny samy mpanohitra aza, tsy mifankahazo an-toerana be ihany: tsy mahay sy mahavita na mihevitra akory izay hifanakalo hevitra. Efa za-dratsy manohitra ny sasany, ka toherina avokoa izay azo mitranga.Izany rehetra izany, tsy inona fa kajikajy sy paipaika amin’izay hifampizarana andraikitra na seza fotsiny ihany: ady tombontsoa manokana hialokalofana amin’ny hoe fiaraha-mamaha olana, fiaraha-mandamina ny toe-draharaha amin’izay mahametimety ny tena iniana korontanina lava, fiaraha-mitantana amina tetezamita…Izay mandrakariva ve no ndeha hatao sy hiainana eto amin’ny tany sy ny fanjakana amin’izay heverina ho olana? Eny, na izay olana amin’ny tena na ny sasany manokana: fahaverezana na tsy fahazoana tombontsoa manokana, ohatra. Mahavery rariny ny vahoaka tsy mahita rirany amin’izay fampandrosoana noho ny adilahy politika lava.Mbola ilaina ve, ohatra, ny fifidianana, raha izany hatrany no atao ho lala-masaka amin’ny fitadiavam-bahaolana amin’itsy sy iroa? Nefa ny mpitondra no efa nampindraman’ny maro anisa amin’ny vahoaka fahefam-panjakana tamin’ny alalan’ny latsa-bato: hanatanteraka ny fanamby nifidianana azy, hamaha ny olan’ny vahoaka…Eny, na ny lalàmpanorenana aza, ohatra, tsy ilaina, raha fifanakalozan-kevitra ho amin’ny fizarana toerana amin’ny fiaraha-mitantana lava no atao eto. Nefa efa voafaritra amin’izany, ohatra, ny amin’ny fe-potoam-piasan’ny mpitondra, ny rafitra na andrimpanjakana iadian-kevitra amin’izay tsy mety ataon’ny fahefana mpanatanteraka.Ny mampanontany tena amin’izany rehetra izany, sao tsy zakan’ny mpanao politika tsy sahy miatrika fifidianana ny fitondrana repoblikanina? Ao anatin’izany ny lalàna, ny rafitra, ny dingana sy fomba amin’izany… Politikan’ny mpitavandra toerana mora foana tsinona no iadiana sy tadiavina lava eto? Na ifandavoana sy ifandovana…Rafaly Nd.L’article Fitondrana repoblikanina misy lalàna sy rafitra a été récupéré chez Newsmada.
Literatiora: namoaka ny boky “Lafatra” i Nala Tiana
Rehefa avy nitondra “Hafatra”, nitohy tamin’ny “Lafatra” indray… Nivoaka ny herinandro teo ny boky amboaran-tononkalo nosoratan’i Nala Tiana, izay nampitondrainy ny lohateny hoe “Lafatra”. Ahitana tononkalo miisa 70 eo izany ary 80 pejy. Nanao ny teny fanolorana i Fanojo Arivelo, izay manana ny toerany eo amin’ny sehatry ny literatiora ankehitriny. Ny edisiona Fontsy no nanatontosa ny boky.“Lafatra, eo amin’ny maha olombelona nofo dia sarotra hita ary tsy misy misy mihitsy ary izany hoe “tongalafatra” fa amin’ny maha zava-panahy masina ny poezia dia angamba mety hisy ihany ny lafatra noho ny fiboiboikan’ny kanto sy ny aingam-panahy ao anatiny… Hafaliana, alahelo, fitiavana, fankahalana ary indrindra fananarana no mandrafitra “lafatra” Tsy lafatra fehy lafatra fotsiny fa lafatra feno hafatra hampitraka ireo milofika”, hoy ny tovolahy nanazava ny tarakevitry ny boky. Amin’ny maha mpanoratra azy, efa maro ny seho an-tsehatra nandraisany anjara nanehoany ny talentany, raha tsy hilaza afa-tsy ny hetsiky ny mpizaka Stelarim tetsy amin’ny Craam Ankatso vao tsy ela akory izay. Marihina fa boky faharoa navoakan’i Nala Tiana ny “Lafatra”.NarilalaL’article Literatiora: namoaka ny boky “Lafatra” i Nala Tiana a été récupéré chez Newsmada.
Nesorina Ratsiraka Elysé: PDS vaovao Razafimanana Christain
Nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana nanaisotra azy amin’ny toerany, ben’ny Tanànan’i Toamasina, araka ny didim-pitondrana navoakan’ny minisiteran’ny Atitany, ny zoma 31 mey teo ka mametraka ny delegasiona manokana (PDS), tarihin-dRazafimanana Christain, efa filohan’ny mpanolotsain’ny kaominina ihany. Ahitana mpiara-miasa roa miaraka aminy : Razafiarisoa Marie Celestine sy Toto Jean. Nanambara avy hatrany ny PDS mitantana ny kaominina Toamasina fa hisy fanovana miaraka amin’nympiasa sy ny vahoaka. “Tanjona ny haha tena Renivohitry ny toekarena an’i Toamasina na fahadiovana na fandrosoana. Hojerena manokana ny momba ny karaman’ny mpiasan’ny kaominina, tsy voaloa 40 volana, mialoha ny 26 jona izao”, hoy izy.Ankoatra izany, hiditra an-tsehatra manomboka anio ireo iraka manokana hanao ny fanadihadiana eo anivon’ny kaominina, araka ny efa nanambaran’ny filoha Rajoelina izany, ny 26 mey teo tany an-toerana. Efa nahavita ny azy kosa ny mpisafon-draharaham-panjakana Ige sy ny avy amin’ny minisiteran’ny Atitany.Sajo L’article Nesorina Ratsiraka Elysé: PDS vaovao Razafimanana Christain a été récupéré chez Newsmada.
IREO TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA AMORON’I MANIA
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « IREO TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA AMORON’I MANIA » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article IREO TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA AMORON’I MANIA a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Basikety-2021: Any Matsiatra Ambony ny N1A dingana voalohany
Tsy niandry ela, andro vitsy taorian’ny fiafaran’ny fifaninanana nasionaly N1A 2020, efa fantatra sahady ny daty sy ny toerana hanatanterahana ny dingana voalohany amin’ity fifaninanana ity, ho an’ny taom-pilalaovana 2021. Raha ny hita ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny federasiona malagasy ny basikety, hatao any Matsiatra Ambony, ny 12 hatramin’ny 20 jona izao, ny dingana voalohany amin’ny fiadiana ny tompondaka nasionaly N1A lahy sy vavy. Efa-bolana monja, araka izany, ny hananan’ny ekipa mpandray anjara miomana ho fiatrehana indray ity fifaninanam-pirenena manana lanjany lehibe ho an’ny basikety malagasy ity. Amin’ny 2 hatramin’ny 10 oktobra kosa ny hanatanterahana ny dingana faharoa ny N1A, hatao eto Antananarivo ihany.Ankoatra izay, hisandrahaka manerana ny Nosy ireo fifaninanana nasionaly. Ny volana novambra 2021 kosa ny hanaovana ny Fivoriambe arahina fifidianana ho an’ny FMBB, izay tsy mbola fantatra ny toerana hanaovana izany. Mi.Raz L’article Basikety-2021: Any Matsiatra Ambony ny N1A dingana voalohany a été récupéré chez Newsmada.